Lyudmila Pavlyuchenko - को sniper, जसको जीवनी द्वितीय विश्व युद्ध मा नाजीहरूले भन्दा विजय आफ्नो अमूल्य योगदान साबित तथ्य को एक विशाल संख्या समावेश गर्दछ। 309 जर्मन सैनिकहरु र अधिकारीहरू यसको विनाशको खातामा। र विरोधीहरूले बीचमा 36 शत्रु snipers liquidated थिए।
12 जुलाई, 1916 - जन्म मिति। यो सेतो चर्च को युक्रेनी शहर को जन्म ठाउ छ। त्यो घर नम्बर3नजिकै स्थित स्कूल मा अध्ययन अनि Lyudmila 14 वर्षको हुँदा, परिवार युक्रेन कीव को राजधानी बस्न सारियो।
बाल्यकाल देखि, केटी विभिन्न मार्शल वर्ण र साहस थियो। त्यो केटाहरूसँग मुख्य रूप व्यवहार, बालिका लागि खेल रुचि थिएन। केटाहरु - बुबा Lyudmila Pavlyuchenko (née Belova) सधैं आफ्नो छोरा को सपना देख्यो भएको छ, उहाँले आफ्नो छोरी बल र आफ्नो साथीहरूको को धीरज मा कमसल थिएन कि खुसी थियो।
नवौं ग्रेड को अन्त मा, Lyudmila त्यो shlifovalschitsy रूपमा काम जहाँ बोट "शस्त्रागार", मा काम गर्न गए। त्यो सफलतापूर्वक 10 औं ग्रेड मा काम र अध्ययन संयोजन गर्न सक्षम थियो।
Lyudmila प्रारम्भिक विवाह गरे। वैवाहिक को समयमा त्यो मात्र 16 वर्षका थिए। चाँडै जवान दम्पतीले एक छोरा Rostislav (2007 मा मृत्यु) भएको थियो। तर पारिवारिक जीवन काम गरेन: धेरै वर्ष को लागि सँगै बस्ने पछि युगल छोडपत्र। तर नाम बाट Ludmila पति त्यागेर गरेको छैन। Lyudmila Pavlyuchenko पति युद्ध मा प्रारम्भिक मृत्यु भएको थियो।
पहिलो प्रशिक्षण सत्र
को बोट "शस्त्रागार" मा काम गर्दा, एल एम Pavlyuchenko एक शूटिंग दायरा frequenting थाले। त्यो एक पटक landfill मा आफ्नो शोषण को भन्नुभयो जो छिमेकी केटाहरू, को सेखी कुरा सुनिन। तथापि, तिनीहरूले मात्र केटाहरू राम्रो गोली सक्नुहुन्छ, र बालिका यो गर्न सक्दैन तर्क। को शूटर रूपमा इतिहास Lyudmila Pavlyuchenko ठीक त्यो बालिका साथै वा अझ राम्रो गोली गर्न सक्ने यी सेखी भएकालाई साबित गर्न चाहन्थे भन्ने तथ्यलाई थाले ...
1937 मा, एल Pavlyuchenko विश्वविद्यालय कीव को अध्ययन गर्न गए। इतिहास को संकाय मा भर्ना, त्यो शिक्षक वा वैज्ञानिक बन्ने सपना देख्यो।
जब युद्ध बाहिर भङ्ग
को सोभियत संघ Lyudmila जर्मन र Romanians, को सोभियत संघ को भविष्यमा नायक को आक्रमण को समयमा, उहाँले स्नातक अभ्यास पारित गर्न आए जो ओडेसा, बस्थे। त्यो सेना सामेल निर्णय, तर बालिका फिर्ता लिएनन्। सेना मा प्राप्त गर्न, त्यो तिनीहरूको साहस र शत्रुहरू लड्न इच्छुकता प्रमाणित भएको थियो। एक पटक अधिकारीहरू Ludmila स्थायित्व परीक्षण प्रबन्ध मिलाए। त्यो एक राइफल दिएको र नाजीहरूले संग collaborated थियो जो दुई Romanians देखाए थियो। यी मानिसहरू मा यसको कभरेज रिस, जसलाई तिनीहरूले जीवन को deprived छन् ती को तीता। त्यसपछि त्यो तिनीहरूलाई दुवै गोली। यस पछि, एक impromptu काम अन्ततः सेना मा स्वीकृत भएको छ।
एक साधारण Pavlyuchenko Lyudmila Mihaylovna को श्रेणी 25 राइफल प्रभाग रूपमा सब गरिएको छ। Vasily Chapaev। त्यो अगाडि हुन रूपमा चाँडै सकेसम्म चाहन्थे। त्यहाँ उनले मार्न गोली छ भनेर साकार, Lyudmila थाहा थिएन जब सामना गर्न शत्रु अनुहार संग सामना यसलाई व्यवहार कसरी। तर त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न कुनै समय थियो सोच्न। पहिलो दिनमा त्यो माथि हतियार लिन थियो। डर हात कांप मा 4-गुना वृद्धि संग उनको राइफल Mossina (7.62 मिमी) पक्षाघात। तर यो मृत गिर नजिकै, तल एक जर्मन बुलेट द्वारा, एक जवान सिपाही, त्यो विश्वास प्राप्त र निकाल प्रहार कसरी देखेर। अब यसको केही रोक्न सकेन।
Lyudmila को sniper पाठ्यक्रम जान कटिबद्ध थियो। आफ्नो जूनियर लप्टन सफलतापूर्वक पूरा Pavlyuchenko आफ्नो युद्धमा स्कोर खुलेको छ। त्यसपछि, ओडेसा नजिकै, यो आवश्यक पनि लडाई platoon नेता मा खसेको प्रतिस्थापन थियो। त्यो घृणा नाजीहरूले नष्ट गर्न, कुनै प्रयास बचाउनुभयो, अझै नजिकै exploding खोल देखि एक मस्तिष्क आघात प्राप्त गरेको छैन। उनको लड आत्मा तोड्न थिएन पनि hellish दुखाइ। त्यो युद्धभूमिमा लड्न जारी ...
अक्टोबर 1941 मा, समुद्री सेना Lyudmila मिलेर उहाँको सहकर्मीसँग Sevastopol रक्षा गर्न थाले जहाँ क्रिमीआ, हस्तान्तरण गरेका थिए। दिन दिन, सूर्य बस, उठ बाहिर आउन थालेका थियो "शिकार" Lyudmila Pavlyuchenko - को sniper, जसको जीवनी घटनाहरू भरिएको छ, मातृभूमि उनको लोयल्टी साबित। घण्टा एक ब्रेक बिना, र गर्मी र चिसो, यो "लक्ष्य" को उपस्थिति को लागि प्रतीक्षा, लुकेर आक्रमण थियो। यो venerable क्रूर जर्मन snipers एक Duel संलग्न आवश्यक थियो जब अवस्थामा थिए। तर धीरज धन्यवाद, शक्ति, चट्याङ्ग Reflexes, त्यो फेरि फेरि पनि सबै भन्दा कठिन परिस्थिति बाट विजयी देखा परे।
को unequal युद्धमा
अक्सर लडाई मिशन Luda लियोनिद Kutsenko साथ सँगै पठाए। उनि लगभग एक साथ को विभाजन मा सेवा गर्न थाले। आफ्नो सहकर्मी केही अगाडि पत्नी लियोनिद Kutsenko बस Lyudmila Pavlyuchenko थियो भनियो। युद्ध अघि व्यक्तिगत जीवन, त्यो काम गरेन। यी दुई वीर मानिस साँच्चै नजिक थिए सम्भव छ।
एक दिन, स्काउट्स विनाश को आदेश देखि एक आदेश प्राप्त भएको पत्ता शत्रु आदेश पोस्ट, तिनीहरूले चुपचाप आफ्नो बाटो क्षेत्र गर्न, गरेको dugout मा पल्टिने र सही क्षण लागि पर्खेको। अन्तमा सोझो जर्मन अधिकारीहरू snipers को दृष्टि मा आए। तिनीहरूले dugout नजिक तिनीहरू दुई सटीक शट संग हिर्काइएका थिए रूपमा आएका थिए। तर देखि हल्ला अन्य सैनिकहरू र हिटलर सेना को अधिकारीहरु सुने झर्ने। त्यहाँ एकदम धेरै थिए, तर Lyudmila र लियोनिद, स्थिति परिवर्तन, र तिनीहरूलाई सबै एक नष्ट गरे। शत्रु अधिकारीहरु र signalers धेरै राख्नु, सोभियत snipers आफ्नो आदेश पोस्ट छोड्न शत्रु बाध्य।
लियोनिद Kutsenko को मृत्यु
जर्मन बुद्धि क्रमबद्घ denunciations सोभियत sniper को गतिविधिहरु मा आदेश। तिनीहरूले भीषण शिकार छेडा, धेरै जाल प्रबन्ध मिलाइयो।
एक दिन समय मा साहसी रूसी snipers को एक जोडी पाइने लुकेर थिए। Pavlyuchenko र Kutsenko लागि मोर्टार आगो तूफान खुलेको छ। को मेरो विस्फोट नजिकै, लियोनिद हात severed। Lyudmila एक गम्भीर अर्को घाइते बनाएको र उनको उनको तरिका गरे। तर, कुनै कुरा मृत्यु लियोनिद Kutsenko गम्भीर चोट लागेको बाट क्षेत्र चिकित्सकहरु प्रयास कसरी।
एक प्रेम एक को हानि देखि तीता थप Ludmilla sworn शत्रुहरू नष्ट गर्न इच्छा बलियो छ। त्यो मात्र सबैभन्दा जटिल लडाई मिशन लागि पुगेको छैन, तर पनि आफ्नो अनमोल sniper अनुभव धेरैजसो दिन प्रयास, फायर जवान लडाकूको प्रशिक्षित।
को रक्षात्मक लडाई समयमा यो थप राम्रो Shooters को एक दर्जन भन्दा माथि ल्याए। तिनीहरूले आफ्नो सल्लाहकार को पाइला निम्न छन्, आफ्नो मातृभूमि को रक्षा गर्न आए
Sevastopol नजिकै एक चट्टानी क्षेत्र मा जाडो आउँछ। सर्तहरू पहाड युद्धमा अभिनय, एल Pavlyucheno रात को आड लुकेर मा प्रकाशित। बिहान तीन बजे देखि, त्यो बाक्लो कुहिरो मा लुकेको, पहाड ridges, को नम hollows। कहिलेकाहीं पर्खाइ धेरै घण्टा, वा दिन लागि तान्नुभयो। तर यो हतार गर्न असम्भव थियो। हामी अग्रिम प्रत्येक चरण आकलन, धैर्य को बाटो जाने थियो। तपाईं आफैलाई पाउन भने, कि मुक्ति रहनेछैन।
त्यो एक छ gunmen विरुद्ध थियो Nameless कि एक पटक भयो। दिन अघि, Pavlyuchenko एक unequal युद्धमा आफ्नो सैनिक थुप्रै नाश उनको Noticing, जर्मन सडक भन्दा entrenched। यो नाजीहरूले छ थियो किनभने Lyudmila, बर्बाद छ जस्तो थियो, र कुनै पनि क्षण मा उनि सूचना र यसलाई नाश हुन सक्छ। तर पनि मौसम उनको लागि उठे छ। पहाड हाम्रो sniper एक लुकेर लागि सहज स्थान फेला पार्न अनुमति एक मोटी कुहिरो descended। तर त्यहाँ अझै पनि पुग्न थियो। आफ्नो bellies मा सार्ने, Lyudmila आफ्नो लक्ष्यमा खोजिएका। तर जर्मन उनको मा लगनशील भई लागिरहेमा र हार्ड शूटिंग गुमाउनु भएन। लगभग टाउको मा मारा एक बुलेट, अन्य आफ्नो टोपी को शीर्ष मार्फत बित्यो। त्यसपछि, बिजुली गति विरोधीहरूले को स्थान अनुमान संग, Pavlyuchenko दुई सटीक शट गरे। त्यो भने, लगभग टाउको मा उनको मारा गर्ने एक, र लगभग निधारमा एक गोली राख्नु गर्ने एक। को जीवित चार नाजीहरूले hysterical सुटिङ जारी राखे। तिनीहरूले उसलाई पीछा, तर टाढा crept, त्यो अन्य तीन थप पछि एक मारे। जर्मन को एक भागे। त्यो मृत मानिरहेको तिनीहरूलाई को एक, तुरुन्तै हल गर्न उहाँलाई क्रल थियो भय राख्ने, हत्या गर्नेहरू शरीर देखेका थिए, तर। एकै समयमा Lyudmila भागे जो एक, अन्य gunmen ल्याउन बारेमा हुन सक्छ भन्ने महसुस। फेरि एक पटक, कुहिरो thickened। उनी अझै पनि प्रभावित उनको शत्रुहरूलाई क्रल गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरू सबै मृत थिए। मरे (राइफल र मेशिन गन) को हतियार उठाएर, यो लुकेर बस गायब। हामी धेरै जर्मन सैनिकहरु नजिक। तिनीहरूले फेरि फायर अंधाधुंध थाले, र त्यो हतियार धेरै प्रकार देखि फिर्ता गोली। यसरी, सोभियत sniper तिनीहरूलाई छैन एक बस व्यक्ति झगडे कि शत्रु विश्वस्त खोजे। बिस्तारै टाढा सार्दा, त्यो शत्रुबाट उम्कन र यो unequal युद्धमा बाँच्न सक्षम थियो।
Lyudmila Pavlyuchenko - सोभियत संघ को हिरो
सर्जन्ट Pavlyuchenko चाँडै नजिकैको तखता हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसको क्षेत्र मा हिटलर धेरै सोभियत सैनिक र अधिकारीहरू हत्या भएको छ जसले एक sniper wielding। आफ्ना बुलेट दुई snipers रेजिमेन्ट मारे। सबैभन्दा दिन त्यहाँ जर्मन र सोभियत sniper शूटर को एक मौन युद्धमा थियो। तर Lyudmila भन्दा छिटो निकास को dugout हिटलर लडाकु मा सुत्न accustomed। र हुनत उसलाई चिसो र ओसिलो देखि सम्पूर्ण शरीर ached, यो छरितो, बस एक शत्रु यसको लागि लक्ष्य को दोस्रो अगाडि विभाजित लागि थियो।
आफ्नो घातक बुलेट मार, Lyudmila आफ्नो खल्ती बाहिर खोजिएका र एक तानाशाह sniper पुस्तक बाहिर झिकेर। यसलाई देखि त्यो 500 भन्दा बढी, ब्रिटिश फ्रान्सेली र सोभियत सैनिक मारिए यसलाई प्रसिद्ध डुनक्रिक थियो भनेर थाह थियो।
समय द्वारा, धेरै चोट लागेको र contusions त राज्य Ludmila बिग्रन छन् उनको दबावपूर्ण को मुख्य भूमि एक पनडुब्बी पठाए।
25 अक्टोबर मा, 1943 Lyudmila Pavlyuchenko - सोभियत संघ को हिरो। सामान्य राजनीतिक विभाग निर्देशन पछि, त्यो क्यानाडा र अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका मा सोभियत डेलिगेसन भ्रमण गर्नुभएको थियो।
उहाँले फर्कंदा, Lyudmila Pavlyuchenko - जसको जीवनी धेरै साहसी लडाकू लागि एउटा उदाहरण बन्न छ sniper, - एक प्रशिक्षक को sniper स्कूलमा "शट" छ।
युद्ध पछि, उहाँले कीव विश्वविद्यालय, नौसेना को सामान्य कर्मचारी मा एक अनुसन्धान सहायक रूपमा काम यो पौराणिक सोभियत महिला स्नातक। 1953 सम्म त्यो कहाँ काम गरे।
पछि, उनको काम वृद्धहरुको मदत गर्न सम्बन्धित थियो। त्यो पनि अफ्रीका को जनताहरु, केवल भ्रमण, धेरै अफ्रिकी देशहरूमा संग दोस्ती को संघ को एक सदस्य थिए।
उनको जीवन र कामहरू फिल्म "Unbroken" ( "Sebastopol युद्ध ') को fatherland आफ्नो छवि र सेवाहरूको विवरण भुक्तानी कि धेरै ध्यान कारण छन्। यो मात्र हो युद्धमा बारेमा फिलिम इतिहास को पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने एक महिला - Sevastopol को, यो Lyudmila Pavlyuchenko बारेमा फिलिम छ। यो लडाई घाटा को दुखाइ व्यक्त जो आफ्नो प्रेरित प्रदर्शन, योगदान छ दोस्रो अगाडि खोल्ने।
Lyudmila Pavlyuchenko: चलचित्रहरू र वास्तविकता मा व्यक्तिगत जीवन
तर यो उल्लेख गर्नुपर्छ फिल्म विकृत यो पौराणिक मानिसको जीवन देखि तथ्य केही भन्ने। Lyudmila Pavlyuchenko - एक sniper, जीवनी यो देश को रक्षा सधैं उनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ भनेर प्रमाणित गर्छ। फिल्म व्यक्तिगत जीवन पहिलो स्थानमा उजागर छ छ, हेरोइन गरेको विचार प्रेम वरिपरि Revolve। वास्तवमा तिनीहरूले लियोनिद Kutsenko सम्बन्ध मा हुँदा प्रेमीहरूको भन्दा बढी सहयोगिहरु थिए। उहाँले साँच्चै पतिको Frontline लागि थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद। र बोरिस को नाम डाक्टर बारेमा कुनै पनि bibliographic स्रोतहरू उल्लेख छैन।
फिल्म को अन्त मा हामी उनको छोरा संग उनको हेर्नुहोस्। केटा बारेमा 12 Lyudmila Pavlyuchenko जसको छोराको परिवार (Rostislav, आफ्नो पत्नी र छोरी) 1932 मा उहाँलाई जन्म दिए साँच्चै उनको घनिष्ठ मान्छे, थिए, देख्यो। फिल्म को फ्रेम मा 1957 छ। त्यतिबेला उहाँले 25 वर्ष पुरानो वास्तवमा थियो।
को NKVD काम Pavlyuchenko नाम को पिता, Lyudmila बस हुन सक्दैन। यो उहाँबाट उनको छोडपत्र पछि त त्यो बसे जो उनको पति, को नाम हो। यो बाबुको - Belova।
आफ्नो जीवनको अन्त सम्म heroism, steadfastness र रूसी महिला साहस को एक प्रतीक बस Lyudmila Pavlyuchenko थियो। बाल अग्रगामी संगठन, त्यो अक्सर कुरा कोसँग, युद्ध बारे उनको कथाहरू सुन्न प्रेम। तिनीहरू एउटा सानो संग्रहालय एल Pavlyuchenko धेरै वर्ष मा राखिएको थियो जो एक slingshot, संग उनको प्रस्तुत। साथै त्यहाँ स्मरणीय उपहार राखिएको पुरस्कार र स्मृति चिन्ह, Ludmilla धेरै यात्रा हस्तान्तरण छ।
चिहान Pavlyuchenko Lyudmila Mikhailovna, जो मास्को मा, 27 अक्टोबर, 1974 बित्नुभयो।
पदक "मास्को को रक्षा को लागि" (फोटो)
राजकुमार इवान कलिता को बोर्ड। इवान कलिता: शासनकालमा
। को 1950-1953 कोरियाली संघर्ष: कारण, इतिहास। कोरियाई संघर्ष को सार के हो?
होटल सोल Luna खाडी Resort4* (बुल्गेरिया): फोटो र समीक्षा
Bootloader - यो के हो? सञ्चालन प्रणाली लोडर
छाला को लोच कसरी फर्कन?
तपाईं कान सुन्न छैन भने, के गर्ने?
बच्चाहरु लाई दस्तुर संग क्यों हुन्छ?
ठाउँ फाइटिङ काल्पनिक। सस्ता माल सैन्य कल्पना
ट्युनिङ सैलून। अरूको गल्ती भुक्तानी गर्न कसरी छैन
अचल सम्पत्ति को मुख्य प्रकार
Hydrangea Levan: वर्णन, खेती, प्रसार
आफ्नो हातले इजोटेर्माल बक्स